Tun Tun's Photo Diary: Taungyi #5 (Sula Muni Lawka Chan Thar Pagoda)
ဒီစေတီတော်ကို ထမ်ဆန်း သွားတဲ့ နေက အပြန်ဝင်မယ် လုပ်တာ မိုးချုပ်သွားလို. ကနေ.မှ သပ်သပ်ေ၇ာက်ဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာက မြို.ကနေသိပ်မဝေးပါဘူး။ ၁၅ မိနစ်လောက် ကားမောင်းလိုက်ရင်ေ၇ာက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ အမြင်ကတော့ ဒီစေတီတော် ကို ရန်ကုန်နဲ. မန္တလေးမှာ ရှိတဲ့ စွယ်တော်မြတ် စေတီတော်နဲ. တော်တော်လေး ဆင်ပါတယ်။
We rentataxi from the market to visit this pagoda (Sula Muni Lawka Chan Thar). It is located on the small hill so good view of surrounding can be seen from that place. Going to this pagoda from the city is not very far. I think it is about 15 minutes by car from the city.
ဒီ ဘေး နှစ်ဖက်မှာ ရှိတဲံ့ရုပ်ထု က ပု၈ံ ကန်တော့ပလ္လင် ဘုရား က ရုပ်ထုနဲ. ဆင်တယ်။
စေတီတော်ထဲမှာ အခုပုံထဲက မြင်ရတဲ့အတိုင်း ၇ုပ်ထုလေးတွေ ပတ်ပတ်လည်မှာ ထားထားပါတယ်။ ရုပ်ထု တခုချင်းစီး ကို သမိုင်းကြောင်းနဲ. ရှင်းပြထားပါတယ်။ ရုပ်ထုတွေ ကို ပဲ ဓါတ်ပုံ ၇ိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ ရှင်းပြထားတာတွေတော့ ဓါတ်ပုံ မရိုက်ခဲ့ဘူး။ စေတီကို တပတ်ပတ် ပြီး ရိုက်သွားလိုက်တာ ၇ုပ်ထုတွေက တော်တော်လေးကို များပါတယ်။
အထဲမှာ ဓါတ်ပုံ၇ိုက်လို.ပြီးတော့ အပြင်ကိုထွက်လာတယ်။ စေတီက ကုန်းပေါ်မှာ ရှိတော့ ဗြူးကောင်းသလို၊ လေတွေ ကလဲ တအားတိုက်ပါတယ်။ ဘု၇ားပေါ်က ပတ်ဝန်းကျင်ရူခင်းတွေ ကို ငေးလို.ရတယ်။ အပြင်ထွက်လာတော့ စုံတွဲ ၂ယောက် က ကျွန်တော့ ကို ဓါတ်ပုံ ဆ၇ာ မှတ်လို. ။ ဓါတ်ပုံ တခါ၇ိုက် ဘယ်လောက် လဲ လာမေးပါတယ်။ မဟုတ်ဘူးလို. ပြောလိုက်တော့ ၇ယ်ပြီးထွက်သွားတယ်။ အမှန်တကယ် ဟုတ်တယ် ငါ ဓါတ်ပုံဆ၇ာ ဆိုပြီး ၇ိုက်ပေးလိုက်ရမှား)
ရင်ပြင်တော် ပတ်ပတ်လည် ကနေ အောက်ကို ကြည့်ရင် အခုလို ၇ူခင်းတွေ မြင်ရတယ်။ မြင်၇ တွေ.၇တာ အားလုံး စိမ်းစိုနေတာပဲ မိုး၇ာသီ ကြောင့်လဲ ပါမယ်။
သဘောအကျဆုံး ဗြူးကတော့ ဒီ တောင်အောက်က စာသင်ကျောင်းလေးပါပဲ။ မြင်ရရုံနဲ.တင် အရမ်းကို ကြည်နူးစ၇ာ ကောင်းပါတယ်။ ကျောင်းဘေးမှာ စိုက်ခင်းတွေ ရှိတယ်။ တောင်တန်းတွေ ရှိတယ်။ ကျောင်းဝန်းထဲမှာလဲ ကစားကွင်းရှိတယ်။ တော်တော်ပျော်စ၇ာ ကောင်းမည့် ကျောင်းပဲလို. တွေးမိတယ်။
အပြင်မှာ အောင်ဘာလေ ထီသည်တွေ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ key chain အရုပ်တွေ အရမ်းချစ်စ၇ာ ကောင်းတယ်။ ထိုင်းမှာလဲေ၇ာင်းတာ တွေ.ဖူးတယ်။ ထိုင်းကလာတဲ့ အ၇ုပ်ပဲလား။ မြန်မကပဲ ထိုင်းကို ပို.သလား မပြောတက်ဘူး။
at 3/17/2014 07:00:00 PM
Labels: Myanmar, Taungyi
Anonymous March 21, 2014 at 6:36 PM
တောင်ကြီးသူတွေက သိပ်လိမ္မာကြတာပဲ ကျွန်မတို့မြို့မှာဖြင့် ဆိုင်ကယ်စီးရင်ဦးထုပ်မဆောင်းကြဘူး အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်တော့ ဒုတ်ခဖြစ်ရော :(